कोकाकोला बहिष्कार गरेका रोनाल्डोलाई मैदानमा कसले हान्यो कोककै झटारो? « Gaunbeshi
कोकाकोला बहिष्कार गरेका रोनाल्डोलाई मैदानमा कसले हान्यो कोककै झटारो?
एजेन्सी । फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई खेल मैदानमा कोकाकोलाको बोतले झटारो हानिएको छ । उनलाई फ्रान्सका समर्थकले कोकको बोतलले झटारो हानेका हुन् । आफ्नो टिमका विरुद्ध गोल गरेपछि फ्रान्सका समर्थकले यसरी रिस पोखेका हुन् ।
कोक बहिष्कार गरेका उनलाई फ्रान्सका समर्थकले मैदानमा काकाकोलाको बोतलले झटारो हाने । फ्रान्सविरुद्ध दोस्रो गोल गरेसँगै फ्रान्सका समर्थकले रोनाल्डोमाथि कोकको बोतल, बि य रसहितको ग्लासले झटारो हानिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
बिहीबार राति भएको खेलमा रोनाल्डोले पोर्चुगलको लागि दुई गोल गरेका थिए। दोस्रो हाफमा २–१ ले पछि परेको अवस्थामा रोनाल्डोले खेलको ६० औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत् गोल गरेका थिए। खेल बराबरीमा सम्पन्न भएको थियो। रोनाल्डोले हालै युरोकपकै पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो टेबल अगाडिको कोकको बोतल हटाएर पानी पिउन भनेका थिए।
सो घटनापछि कोकाकोला कम्पनीको सेयरमा गिरावट आएको थियो । ४ अर्ब अमेरिकी डलर कोकाकोला कम्पनीले गुमाएको थियो । यो घटना पछि रोनाल्डोको निकै चर्चा भयो । उनकै कार्यशैली अपनाउँदै केही कलाकारहरुले यस्ता पेय भन्दा पानी नै स्वास्थ्यका लागि उत्तम भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘ओ भाई मा रो मुझे‘’ भन्ने पाकिस्तानी क्रिकेट फ्यानको भयो हालत ! देशले हारेपछि स्टेडियमबाट घर जानै मानेनन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
सन् २०२१ को टी–२० विश्वकपमा पाकिस्तानी टोलीको गौरवपूर्ण यात्राको अन्त्य भएको छ । बिहीबार
एजेन्सी । भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पक्राउ परेका छन् । उनलाई भारतको हरियाणा प्रहरीले